Uyaqhubeka nokujula umgodi woqhekeko kuKhongolose KwaZulu-Natal - Bayede News
Uyaqhubeka nokujula umgodi woqhekeko kuKhongolose KwaZulu-Natal
Ezingena manje, Ipolitiki Yamaqembu
ISELULEKO esijwayele ukunikwa abantu sithi ukuze ukwazi ukuphuma emgodini kumele uyeke ukumba, kodwa iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal kubonakala liqhubeka nokuwujulisa umgodi.
Lokhu kuqiniswe kakhulu nayizinkulumo zeMeya kaMasipala Wesifunda iHarry Gwala uMnu uMluleki Ndobe othe kungekudala uzokwenza isimemezelo esinqala kulandela ukuhoxiswa kwecala lokubulala abebekwe lona. UNdobe uthe usahlanganisa amakhanda nabammeli bakhe. Lesi simemezelo kungenzeka siguqule okuningi kwipolitiki yesifundazwe ikakhulukazi eqenjini elibusayo njengoba ziya ngokushoshela nezinsuku zokhetho oluzobanjwa ziyisi-8 kuNhlaba. Osekubonakala kushubisa kakhulu izinto kuKhongolose muva nje, ukukhishwa kohlu lwabazomela iqembu eSishayamthetho nakuZwelonke njengoba kukhona okungenzekanga ngokwezifiso zabo, kanti abanye bathi ngcingci kamdoli.
UNdobe usola ukuthi ukuboshwa kwakhe bekuyitulo elakhiwe futhi kunenhlese yezepolitiki. Izinsolo zakhe ziqinisekiswe nanguMqondisi Wezokushushisa Kuzwelonke u-Advocate uShamilla Batohi othe uzokwenza uphenyo ukuthi kungani waboshwa ubufakazi bungahlangani. UNgqongqoshe Wamaphoyisa Kuzwelonke uMnu uBheki Cele uvikele abaphenya amacala okubulala okuhlobene nepolitiki KwaZulu-Natal ethi ithimba lezokuphepha lisebenza ngokungachemi. UCele uthe leli thimba elihlanganisa bonke ongqongqoshe beminyango ethinta ukuphepha kwezwe elesekwa ngoNhlaba wezi- 2018 linamacala amaningi eliwaphenyayo.
UNdobe akazane aphendule kulokho okubekwe yilezi zikhulu. KwaZulu-Natal lona ngomunye wabaholi abaqavile kuKhongolose ngenxa yamagalelo akhe nolwazi olunzulu ekuphatheni omasipala. Uhlonishwa nangokuba mnkantshubovu kwazise usephathe lesi sikhundla amahlandla amabili.
Kukhona ukukhuluma okuthi uNdobe ubeboshelwe amanqina enyathi njengoba edlondlobala kwezepolitiki futhi esendaweni yesithathu ohlwini lwamalungu e-ANC ayongena eSishayamthetho okumenza abe namathuba amahle okuphatha isikhundla esiphezulu kuHulumeni waKwaZulu- Natal. Labo abamesekayo ikakhulukazi isifunda iHarry Gwala bathi ngenxa yolwazi lwakhe lo Masipala angakwazi nokuphatha uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana, Owezomnotho noma Owezimali. UNdobe uthi uzobikela ubuholi be-ANC ngamanye amaqabane abenza okuthile ngodaba lwakhe. Uthi kuningi obekukhulunywa obekuqhamuka ngisho kubaholi abahloniphekile beqembu. Ezinkundleni zokuxhumana kukhona abebethi uMnyango Wamaphoyisa ugeje umgodi ngokuxhamazela ubophe uNdobe ubufakazi bungakahlangani. Le nsizwa engeyokuzalwa eMzimkhulu iyazigqaja ngomlando wayo omude emzabalazweni. Ngeledlule iphephandaba LaboHlangu elinguzakwethu weBAYEDE ngeledlule libikile ngokuboshwa kukaNdobe. Umbiko uthe ukuboshwa kwakhe kuphosele inselelo enkulu i-ANC ngoqhekeko okungase kuludale phakathi kwamalungu eseka lo mholi nalawo abengobhongoza bokuthi bonke abethweswe amacala, noma engakabalahli, kufanele behle ezikhundleni.
Indlela i-ANC ezophendula ngayo ezinyathelweni ezingathathwa uNdobe njengoba sekubalwa inyanga kuyiwe okhethweni, ibukeka izofaka ingcindezi noma ngabe izwi lokugcina lithini.
Emabangeni aphezulu lo mholi wayeyilungu nomholi wombutho wabafundi iCongress of South African Student (Cosas), nasemabangeni aphezulu waphinde wahola iSouth African Student Congress (Sasco). Ube yilungu leProvincial Task Team, wabamba nesokuba uSihlalo Wesifunda ophikweni lwentsha ye-ANC.
“Angikhathazekile ukuthi amacala ahoxisiwe okwesikhashana nokuthi kusengenzeka avuke. Okungikhathazayo ukuthi kungani udaba luze lwaya enkantolo ubufakazi bungahlangani. Angingabazi ukuthi likhona itulo lezepolitiki kulolu daba,”
Kuvuke uhlevane kwazwakala nasemoyeni ukuthi kuyishintshile impilo yakhe uNdobe ngesikhathi echaza ngosizi adlule kulo, evalelwe ejele ngecala abesoleka kulo lokuba yingxenye yokubulawa kowayeyikhansela le- ANC eMzimkhulu uMnu uSindiso Magaqa. NgoMsombuluko uMshushisi eNkantolo yesiFunda eMzimkhulu uSohana Moodley unqume ukuthi isicelo sebheyili sikaNdobe neMeneja kaMasipala iHarry Gwala uMnu uZweliphansi Skhosana angeke sisaqhubeka ngoba ubufakazi obubahlanganisa naleli cala abuhlangani.
“Okungixakayo ukuthi kuyavela nokuthi abezokushushisa KwaZulu-Natal bawatshela amaphoyisa ukuthi ubufakazi abuhlangani kodwa wona aqhubeka nokungibopha. Kumele sazi ukuthi iNingizimu Afrika ibuswa ngoMthethosisekelo, wonke umuntu umsulwa aze alahlwe icala. Ngizokwenza isimemezelo esinqala kungekudala, kodwa sisahlanganisa amakhanda nabameli bami ngegxathu esizolithatha,” kusho uNdobe engxoxweni abe nayo izolo nesiteshi somsakazo iSAFM.
Uthe namanje usathuthumela ngokuboshwa kwakhe futhi udiniwe ngoba wayengazi lutho ngisho nangophenyo olwaluqhubeka wezwa sekuthiwa sekugaselwe emahhovisi uyafuneka. Uthi ngalelo langa wayesebenza njengokwejwayelekile esifundeni iTheku lapho ejutshwe khona iqembu lakhe i-ANC. Uthi akakaze abuzwe ngisho nowodwa umbuzo ngalolu daba noma eseboshwa wabambisana nabaphenyi futhi wazinikela esiteshini samaphoyisa ngoba ezazi ukuthi umsulwa.
“Ngiyisisebenzi esithembekile se-ANC ngineminyaka engama-25 ngiyilungu elizithobile lomzabalazo futhi ngisuka kude nawo. Ngibe ilungu leCosas, iSasco, iCosatu, i-ANC, namanje ngiseyiMeya yaseHarry Gwala. Sengibambe izikhudla eziningi kuHulumeni. Ngineziqu zeMBA njengamanje sengenza iziqu zePhD. Angazi ukuthi ngihlangana kanjani nokubulawa kukaMagaqa, ngisho nenkantolo ibingazi njengoba namacala ehoxisiwe. Kuyishwa ukuthi umndeni wami, izingane nomkami bekumele badlule kulesi simo behliswa isithunzi kwabezindaba, ezinkundleni zokuxhumana nasemphakathini ngokubanzi. Kuningi okushiwo abantu ngami ngisho okunye bekuqhamuka kubaholi abahloniphekile be-ANC”.
Usabise ngokuthi uzobika ngokusemthethweni ebuholini be-ANC ngalawo maqabane obekukhona abekwenza ngodaba lokuboshwa kwakhe ngoba kumehlise kakhulu isithunzi.
“Angikho muhle empilweni nasemphefumulweni, empeleni ngidinwe kabi, ngibuka ukuthi lento izokwenzani empilweni yami ngokuhamba kwesikhathi. Lento izohlala nami impilo yami yonke, futhi isivele isiyenze umonakalo omkhulu empilweni yami nasemndenini”.
nguMfo waKwaNomajalimane Mar 28, 2019